EPL: Waa kuwee 11-ka laacib ee todobaadkan ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska? | Gool FM	Saturday, February 6th, 2016	Home
EPL: Waa kuwee 11-ka laacib ee todobaadkan ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska?
(London) 11 Dis 2012 Sedexda reer Manchester United ee Wayne Rooney, Rio Ferdinand iyo Rafael ayaa kujira xulka horyaalka Ingiriiska kadib guushoodii qayrul caadiga ahayd ee ay libtii kala carraabeen kulankii derby-ga Manchester.
Hadaba yaa la oran karaa todobaadkan way ugu wanaagsan yihiin horyaalka Ingiriiska ee EPL marka lasoo xooriyo oo laga xulo 11-ka ugu xarfaansan, halkan hoose ka eeg 11-ka laacib oo loo safay qaabka 4-3-3:
Qiimeeynta: Qiimeeynta: Qiimeeynta: Qiimeeynta: TOTW Apps: 4
Qiimeeynta: Qiimeeynta: Qiimeeynta: TOTW Apps: 2
Qiimeeynta: Qiimeeynta: Qiimeeynta: TOTW Apps: 3
Wararka	Eden Hazard oo xaqiijiyey in uu warqad u qoray Jose Mournho! Ogow sababta?)
(Madrid) 06 Feb 2016. Cristiano Waxa uu jecelyahay ...	Eden Hazard oo qorshaynaya inuu ku biiro Real Madrid (MARCA)!
(Madrid) 06 Feb 2016 Wargayska Marca ee dalka Spain ...	Ma ciyaari doonaa Alexandre Pato kulanka barri ee Man United? Hiddink oo ka hadlay!
(London) 06 Feb 2016 Tababaraha kooxda Chelsea Guus Hiddink ...	“Isaga ayaa i soo helay aniga oo ah 20 jir dhibna igalama dhexeeyo” Valdes oo ka hadlay Van Gaal!
(Manchester) 06 Feb 2016 Goolhayihii ka tagay kooxda Man ...	Kevin Strootman oo dib ugu soo laabtay garoomada waqti dheer kadib! (SAWIRRO)
(Roma) 06 Feb 2016 Laacibka qadka dhexe ee kooxda ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro